Ny fahatongavan'ny Marketing Immersive, ny asa fanaovan-gazety ary ny fanabeazana | Martech Zone
Ny zava-misy virtoaly sy fampitomboana dia hanana andraikitra lehibe kokoa amin'ny hoavinao. TechCrunch mialoha io AR finday io dia mety ho tsena $ 100 miliara ao anatin'ny 4 taona! Tsy maninona na miasa amin'ny orinasan-teknolojia avo lenta ianao, na amin'ny efitrano fandraisam-bahiny mivarotra fanaka birao, ny orinasanao dia hahazo tombony amin'ny fomba miaina amin'ny traikefa amin'ny varotra lalina.
Inona no mahasamihafa ny VR sy ny AR?
Ny virtual reality (VR) dia fialamboly nomerika manodidina ny mpampiasa, raha toa kosa ny reality augmented (AR) dia mametaka singa virtoaly amin'ny tontolo tena izy.
Aza mino ahy? Topazo maso ireo indostria sasany efa mandray ny VR / AR.
Tamin'ity herinandro ity CNN dia nanomboka ny seha-pifaneraserana ho an'ny asa fanaovan-gazety VR. Ity vondrona ity dia handefa hetsika vaovao lehibe amin'ny horonantsary 360 ary hanolotra seza eo anoloana ho an'ireo mpijery. Azonao an-tsaina ve ny eo amin'ny laharana voalohany amin'ny faritra misy ady, manana seza eo anoloana eo amin'ny fanaovan-gazety fanaon'ny White House manaraka, na mijoro eo imason'ny rivodoza? Izay no hitondran'ny mpanao gazety miroso amin'ny latabatra, ahafahantsika manakaiky kokoa ny tantara noho ny teo aloha. CNN dia nanangana ny singa vaovao tamin'ny famoahana ny tantaran'ny horonantsary VR mandrakotra ny fihazakazaky ny omby any Espana.
Nandritra ny taona lasa, CNN dia nanandrana ny VR, namoaka tantara vaovao maherin'ny 50 tamin'ny horonantsary 360 kalitao avo lenta, nanome fahatakarana lalindalina kokoa ny mpijery ny fahasimban'ny Aleppo, fijerena ny laharana voalohany amin'ny fanokafana an'i Etazonia ary fotoana iray hiaina ilay fientanam-po. skydiving - amin'ny fitambarany, niteraka fomba fijery maherin'ny 30 tapitrisa amin'ny atiny 360 amin'ny Facebook fotsiny. Source: CNN
Lowe's dia mikatona ny filokana ahafahan'ny VR manelingelina ny indostrian'ny fanatsarana trano. Manangana traikefa virtoaly virtoaly ao amin'ny magazay izy ireo izay natao hanomezana fampianarana ho an'ny mpanjifa ny tetik'asa toy ny fampifangaroana rihitra na tile. Nandritra ny fitsapana natao dia nitatitra i Lowe fa manana mpanjifa 36% no mahatadidy tsara kokoa ny fomba fanatanterahana ilay tetikasa raha oharina amin'ny olona izay mijery horonantsary Youtube.
Ny ekipan'ny fironana Lowe dia nahita fa ny millennial dia mandao ny tetikasa DIY satria tsy manana fahatokisan-tena amin'ny fanatsarana trano sy fotoana malalaka hanaovana tetikasa izy ireo. Ho an'i Lowe, ny zava-misy virtoaly dia mety ho fomba iray hanodinana an'io fironana io. Source: CNN
Marketing tsy miovaova
Raha ny fahitana ny marketing dia ny famaritana tanteraka ny teny marketing. Afaka manomboka sary an-tsaina mora foana ny isan'ny fotoana mety hitrandrahana amin'ny doka, fametrahana ny vokatra ary ny fomba famoronana hanehoana marika iray. VR dia mamaha olana be dia be ho an'ny mpivarotra. Manolotra antsika fomba iray hamoronana traikefa lalina izay misy akony, tsy hay hadinoina ary mahafinaritra. Tsy lasa tsara lavitra noho izany!
Zava-misy mahaliana vitsivitsy kokoa ho anao. Vao nanampy i Vimeo ny fahaizana mampakatra sy mijery horonantsary 360 degre. Hanolotra mpamokatra sarimihetsika sy famoronana hafa hampiseho sy hivarotra atiny 360 ity. Aza adino koa ny momba ny facebook. Hatramin'izao dia misy horonantsary 360 degre maherin'ny iray tapitrisa sy sary 360-degree XNUMX-diplaoma navoaka. Tsy misy antony tokony hiheverana fa tsy hitohy io fironana io.
Tianay ny mandre ny eritreritrao momba ny hoavin'ny VR / AR. Hatraiza ny fiatraikany azonao amin'ny indostriao? Azafady zarao!
Tags: CNNimmersivefanabeazana lalinafanaovan-gazety mirobokavarotra mirobokaLowe nymampidina holoroomVimeovimeo 360
Inona no atao hoe Advocacy? Ahoana no fomba fambolanao azy?